> Resource> tọghata> Ike Tinye MP4 / MPEG ka iTunes? Edozi.
Ị na-enwe nsogbu na-agbakwunye MP4 (MPEG) na iTunes? MP4, dị ka akpa format, dị iche video codec. Ọ bụrụ na gị MP4 faịlụ na-ajụkwa iTunes, ọ bụ dịcha na codecs na MP4 faịlụ ndị unaccepted site iTunes. Ka idetuo MP4 ka iTunes, ị ga-mkpa iji tọghata MP4 ka iTunes MP4 codec. Lee, m ga-akwado a oké video tọghatara inyere gị aka.
Best MP4 / MPEG Video Ntụgharị maka iTunes (Windows / Mac)
• A ọkachamara video akakabarede ngwá ọrụ iji tọghata MP4 / MPEG ka iTunes MP4 Koodu.
• Kachasị presets maka iTunes enweghị n'ịtụle mgbagwoju anya oke ntọala.
• Dezie videos dị ka onye dị elu video edezi ngwa.
• Kpọmkwem tinye ikwu, nkọwa ma ọ bụ ndị ọzọ metadata ọmụma gị video.
• Super ngwa ngwa akakabarede ọsọ ele videos ozugbo.
Ntak emi Họrọ Video Converter Ultimate (Windows / Mac)
Tọghata MP4 ka iTunes
Nke a MP4 ka iTunes video Ntụgharị ka kachasị presets ka ị setịpụrụ mmepụta format ma dakọtara na iTunes kamakwa na gị kwekọrọ ekwekọ Apple ngwaọrụ.
Tinye ma ọ bụ Dezie iTunes Movie
Ị nwere ike dị nnọọ dezie gị MP4 video ka gị onwe gị na nkiri site trimming, na-agbakwunye mmetụta, na-agbakwunye sobtaitel, wdg Ọbụna ọ na-ahapụ gị ọkụ video ka DVD na-ekiri na nnukwu ihuenyo.
Tinye Metadata ka iTunes Movie
Nke a MP4 / MPEG ka iTunes Ntụgharị ike ka ị na tinye ma ọ bụ dezie metadata gị videos, na-eme gị videos anya dị ka ndị na-akwụ ụgwọ ndị.
30X Nchigharị Speed
​​mwute na nnukwu ego nke oge nọrọ na video akakabarede? Nke a ngwa na ya 30X ngwa ngwa akakabarede ọsọ ike tọghata nnukwu faịlụ dị ka a nkiri na dị nnọọ nkeji ole na ole.
Olee otú tọghata MP4 / MPEG ka iTunes MP4 Codec
Nzọụkwụ 1: Import faịlụ ka a MP4 / MPEG ka iTunes Ntụgharị.
Mbubata gị Obodo MP4 video faịlụ ka a ngwa n'ihi na video akakabarede, i nwere abụọ ịnara ụzọ. Otu bụ see menu na-agagharị na kọmputa gị iji họrọ ma mbubata gị MP4 faịlụ. The Secord na otu onye bụ kpọmkwem ịdọrọ na dobe gị obodo MP4 faịlụ a usoro.
Nzọụkwụ 2: Họrọ otu iTunes akwado usoro dị ka mmepụta format
Iji mee ka mmepụta faịlụ 100%-akwado site na iTunes, na ozugbo-kachasị tupu ntọala na-ike na-atụ aro. Ahọpụta otu onye n'ime ha dị ka mmepụta format bụ nhọrọ kasị mma n'ihi unu, otú ị na-echegbu onwe m banyere video codec njehie.
Mepee mmepụta format window site ọkụkụ "mmepụta Format" na akara ngosi na n'akụkụ aka nri nke isi interface, na ahụ na-aga na "Apple" Atiya iji họrọ Apple ngwaọrụ nlereanya ị chọrọ. Mmepụta format bụghị nanị Ofụri Esịt dakọtara na iTunes, ma na-adabara kwekọrọ ekwekọ Apple ngwaọrụ kasị mma.
Nzọụkwụ 3. tọghata MP4 / MPEG ka iTunes dakọtara formats
Pịa "tọghata" button na ala-nri akuku nke a ngwa si interface. Site n'ime nke a, ị na-arịọ a na ngwa na-amalite converting gị MP4 faịlụ ka iTunes. Ọzọ, ị nwere ike ka ọ na-eme na-ezu ike ihe na ndabere.
Cheta na: Na nke a smart Video Ntụgharị, converting MP4 ka iTunes bụ ikuku. Ozugbo ndị a converted videos na-atụkwasịkwara gị iTunes Ọbá akwụkwọ, i nwere ike iji ha na ọ bụla nke gị Apple ngwaọrụ dị ka ma ọ bụrụ na ha na-mere kpọmkwem maka iTunes. Dị nnọọ jikọọ gị Apple ngwaọrụ na kọmputa site USB, na mgbe ahụ mmekọrịta ndị a mmepụta faịlụ gị ngwaọrụ site na iTunes.
Video Tutorial: Olee otú iji tọghata MP4 / MPEG ka iTunes
Ajụjụ banyere agbakwụnye MP4 / MPEG ka iTunes
Ajụjụ: Gịnị mere m ike tinye MP4 ka iTunes?
I kwesịrị ime ka iTunes akwado faịlụ nkọwa. Biko ego n'okpuru tebụl. Ọzọkwa MP4 bụ a multimedia akpa iche iche na codec. Ma eleghị anya, gị MP4 codec bụ dakọtara na iTunes. Ọ bụrụ na gị MP4 ka ike ghara kwukwara n'ime iTunes, ị ga-agbalị Video Converter Ultimate.
MPEG-4 na H.264 mkpakọ
File extensions: .mp4, .m4v, .mov
Video Format: MPEG-4 na H.264
Data Rate: Up 160 kbps
Image Size: 640 x 480 pikselụ
Etiti Rate: 30 okpokolo agba kwa abụọ
Key ụba: Kwa 24 okpokolo agba
File extensions: .m4a
Audio Format: ntọala Low-Complexity Profaịlụ na AAC-LC (Music)
iPhone, niile ụdị
Channels: baraaka na .m4v, .mp4, na .mov formats
iPhone 3GS, 3G na Original
Mmepụta Sample Rate: 48 kHz
iPad, niile ụdị
Ngbanwe Ogo: Mma
File extensions: .mp3
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka MP4 kasị na Mac / Win
Olee otú Tinye ndepụta okwu ka MP4 Files na Mac / Win
Olee otú iji tọghata WMV ka MP4 na ala na Mac / Win
Olee otú iji tọghata AVI ka MP4 Na Zero Ogo Loss na Mac / Win
Apụghị Play MP4 Files na Xbox 360? Kpebiworo
Olee otú iji tọghata Torrent ka MP4
Olee otú iji tọghata MP4 ka iPad (iPad 3, iPad 4, iPad Obere gụnyere)
Olee otú iji tọghata Napster ka iTunes